Tontolon’ny bilaogy Toniziana : Ahoana No Anoratana Blaogy Momba ny politika, Nefa Tsy Voasivana? · Global Voices teny Malagasy
Tontolon'ny bilaogy Toniziana : Ahoana No Anoratana Blaogy Momba ny politika, Nefa Tsy Voasivana?
Voadika ny 02 Aogositra 2017 23:04 GMT
Toa nahita fomba maro iresahana mikasika ny politika Toniziana ireo Toniziana mpitoraka blaogy no sady misoroka tsy ho tratran'ireo mpiambina ATI (Sampandraharaha Toniziana momba ny Aterineto) misahàna ny fandàvana ny fahafahana miditra sy fanivànana izay tranonkala rehetra mitsikera ny fanjakana Toniziana sy ny mpikambana ao aminy.
Taorian'ny fampielezankevitra nataony tamin'ny volana Desambra 2006, izay nikendry blaogy maro nitsikera kely ny toe-draharaha tao amin'ny firenena, toa milefitra kokoa ny ATI.
Nandray izany ho famantarana tsara i Zizou avy any Djerba , am-panantenana fa fambara mialoha anà fisokafana avy amin'ny fanjakana izany, na mihevitra aza izy amin'izany fotoana izany ihany hoe kely ireo lahatsoratra hitantsika nitsikera ny fanjakana taorian'izany fampielezankevitra izany, nmpiany hoe ireo zava-nitranga farany (ady basy teo amin'ny polisy sy Salafista mitam-piadiana) dia misy ifandraisany amin'ity fihetsika ity.
Il est aussi vrai que les blogueurs tunisiens ne se sont plus risqué dans les sujets sensible et le surf sur les sujets borderlines ne semble plus etre le passe temps favori de la majorité des blogueurs.
En tout cas on ne peut pas nier que tout ceci est la consequence de l'episode de Soliman…
Marina fa tsy nanoratra mikasika ny lohahevitra mafampàna ireo Toniziana mpitoraka blaogy ary na ireo lohahevitra momba ny sisintany aza dia nosorohan'ny ankamaroan'ireo blaogera ny hiresaka azy. Na izany aza, tsy afaka ny handà ny tsirairay fa vokatry ny zava-nitranga farany teo tao Soliman izany ..
Ny hany blaogera tokana mbola eo ambany fanaraha-mason'ny ATI dia i Mouwaten Tounsi, izay efa fanin-6 amin'ny adiresiny vaovao nanomboka tamin'ny taona 2006. Nisafidy ny ho mivantambantana ao anatin'ny lahatsoratra soratany i Mouwaten, indrindra tao amin'ny taratasy misokatra nosoratany ho an'ny filoha, mikasika ny fanomezana fahalalahana bebe kokoa ho an'ny Fanaovana Gazety.
Marina fa tato ho ato, vitsy ireo lahatsoratra nitsikera ny fanjakana. Matetika tena hita be any anatin'ireo fanehoankevitra manerana ireo lahatsoratra sosialy na toekarena, toy ilay lahatsoratr'i Tarek Cheniti mikasika ny fanomezana ny fampianarna ho an'ny tsy miankina [fr] na saro-takarina toy ny lahatsoratra nosoratan'i Isis [fr] momba ny zava-bita tao amin'ny firenena nandritra izay 51 taona nandalo izay hatramin'ny nahazoany fahaleovantena. Am-piezahana mampiseho ireo olana sasantsany nefa tsy iatrehana ny antony, sorahan'ireo bilaogera ny tsy haha-lasibatry ny ATI azy ireo.
Fomba iray hafa tena misy asa famoronana mba hisorohana ny fanivànana rehefa miresaka momba ny politika no natolotry ny mpitoraka blaogy OuNormal (mahazatra). Mikasika ny firenena virtoaly iray sy governora virtoaly (izy tenany) ny blaoginy NormalLand. Nanomboka nanendry mpitoraka blaogy toniziana maro samihafa ho filohanà departemanta izy. Tena tia manaraby, ho an'ny fotodrafitrasa mihoatra noho izay takatry ny saina , varo-maizina, ady sy fifandirana ary departemanta iray ho an'ny kolikoly mihitsy aza ireo departemanta natsangany! Namorona parlemanta iray antsoina hoe Znouss counsel mihitsy aza izy ( ny Znouss dia jiolahimboto no andikan'i Samsoun azy). Manana saina iray nalaina tahaka avy amin'ilay sainam-pirenena Toniziana tena izy i NormalLand ary manana hiram-pirenena tena mampihomehy.
Maro ireo mpitoraka blaogy maro nandray anjara tamin'ity tantara foronina ity, indrindra rehefa lasibatry ny fanonganam-panjakana [Ar] nataon'ny iray amin'ireo mpanampy azy Chanfara[Ar] izay nanery azy hikarakara fifidianana filohampirenena [fr] izay nanambaran'ny mpitoraka blaogy maro ny fandraisany anjara tamin'izany toa an'i Mouwaten[fr] sy Temeraire[fr].
Io, raha ny hevitro, no tena manamarika manokana ireo Toniziana, izay manolotra foana fomba maro hiatrehana famerana maro ao amin'ny fiarahamonintsika.